Gabdhaha oo looga digay inay raadiyaan ragga taajiriinta ah ee Xaasaska leh - Talo - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Gabdhaha oo looga digay inay raadiyaan ragga taajiriinta ah ee Xaasaska leh – Talo
Dr. Charlotte Oduro, oo ah la-taliye dhanka guurka ah ayaa gabdhaha kula talisay inay joojiyaan raadinta ragga taajiriinta ah isla markaana xaasaska leh taasoo ay ku sababeysay in raggaas aysan waligood ka dhigan doonin xaasas balse ay ku qabi doonaan gabdhaas Khudbo siro.
Waxay sheegtay in ragga maal qabeenada ah ay ku raaxeystaan wehelka gabdhaha yar yar balse aysan waligood ka tagi doonin xaasaskooda si ay u guursadaan gabdhaas yar yar.
Dr. Charlotte Oduro, waxay tilmaamtay in ragga taajiriinta ah ee xaasaska leh ay lacag siin doonaan gabadhaha yar yare e ay u baahanyihiin isla markaana ay ka dhammeyn doonaan waqtigooda maadaama ay sheegtay in raggaas ay goor horeba qoysas lahaayeen.
Haweeneydan ah la-taliyaha guurka ayaa wax layaab leh ku tilmaamtay sababta ay gabdhaha iminka u rabaan inay noqdaan kuwo lagu qabo khudbo siro si ay u helaan guri, gaari iyo in safarro loo wado.
Gabadhaha doonaya inay noqdaan kuwo ay ragga taajiriinta ah ku qabaan khudbo siro ayay ku sifeysay “kuwo raqiis ah” iyadoo kula talisay inay guursadaan rag leh aragti isla markaana doonaya inay isla dhisaan mustaqbal.
Haddii Ninkaagu Sameeyo 7-daan Waxyaabood, Ha Iska Sii Deyn - Gabdhaha Waa Inay Aqriyaan